IDisroot: Ipulatifomu yamahhala, yangasese nephephile yamasevisi aku-inthanethi | Kusuka kuLinux
Muva nje kundatshana yethu edlule kubizwe GAFAM versus Comunidad del Software Libre: Control o Soberanía sisho ezinye izinhlelo zokusebenza eziwusizo we «Comunidad de Software Libre», okuthe ngaphandle kokukhululeka nokuvuleka, kwanikeza amazinga amahle okuphepha nobumfihlo. Futhi phakathi kwabo kwakukhona «Disroot».
«Disroot» es, icaphuna indawo yayo esemthethweni ngeSpanishi: "Una ipulatifomu enikezela ngezinsizakalo eziku-inthanethi, kusekelwe ezimisweni zenkululeko, ubumfihlo, ukuhlangana kanye nokwabiwa kwamandla ezwe". Ngakho-ke, ibuye ithi iza: Akunabalandeli, akukho zikhangiso, akukho kuphrofayili, akukho mininingwana yedatha!
"IDisroot yiphrojekthi ezinze e-Amsterdam, igcinwa ngamavolontiya futhi incike ekusekelweni ngumphakathi wayo".
«Disroot» iyipulatifomu eku-inthanethi edalwe ekuqaleni ngonjiniyela bayo bangempela, icabanga ukufeza isiza engabanikeza yona nabanye, izinhlelo zokusebenza ezidingekayo zokuzuza xhumana, yabelana futhi uhlele. Ngaleyo ndlela, ukuthi lezi zinhlelo zokusebenza zihambisane nemigomo yokuba: Kuvuliwe, Kwabelwe, Kwabelwe futhi uhlonipha i- Inkululeko Nobumfihlo.
Baqala-ke «Disroot». Ngokuyinhloko ngokuhlanganisa amathuluzi nokwenza kusebenze amaphrojekthi akhona endaweni eyodwa, bese ungeza amanye amaphrojekthi wakho ku- bazuze we «Comunidad del Software Libre» namanye amaqembu anentshisekelo, ngokujwayelekile.
«Disroot» yingxenyekazi efuna ukuguqula indlela abantu abajwayele ukusebenzisana ngayo kuwebhu, okusho ukuthi, ifuna ukuba futhi inikeze enye indlela enhle futhi esebenzayo kubantu, ngokwezinsizakalo ezenziwa online, ikakhulukazi ukuxhumana, ukuze bazuze gwema ukusetshenziswa kwendabuko kwesoftware ephathelene nokuvalwa kwi-Intanethi. Njengoba, «Disroot» kungenye yezindlela ezimbalwa ezivulekile nezokuziphatha ezitholakalayo, ezimele ngokweqiniso, ezigxile ekuzuzeni abantu hhayi ekuxhashazweni kwabo.
1 Susa izimpande
1.1 Ukuvulwa kwe-akhawunti
1.1.1 I-Paso 1
1.1.2 I-Paso 2
1.1.3 I-Paso 3
1.1.4 I-Paso 4
1.1.5 I-Paso 5
Ukuvula i-akhawunti ku- «Disroot», Inqubo ilula kakhulu. Nazi izinyathelo ezidingekayo ukwenza lokhu:
Vula indawo esemthethweni ngeSpanish bakithi «Navegador web». Iya esigabeni «Servicios» bese ucindezela noma iyiphi yazo. Ngokwesibonelo sethu, sizokhetha inketho yokuqala ebizwa ngokuthi «Correo». Uma lesi sigaba noma esinye sesivuliwe, inkinobho ibizwa «Inscribirse a Disroot».
Ngemuva kokucindezela inkinobho «Inscribirse a Disroot», sethulwa nge«Formulario de Registro» okufanele sigcwalise, bese sicindezela ekugcineni kwaso, inkinobho ebizwa «Continuar». Izinkambu ezilandelayo zivela kuleli fomu:
Igama lomsebenzisi: Lapho kungasetshenziswa kuphela izinhlamvu ezincane futhi ngaphandle kwezikhala, kusuka ku-A kuye ku-Z ngaphandle kwe-Ñ, izinombolo nezikhathi.
Bonisa igama: Lapho kunconywa ukusebenzisa okufanayo okusetshenziswe ku-Username.
Umbuzo wokuqinisekisa: Inkambu yokuqinisekisa lapho umbuzo ongezansi kufanele uphendulwe ubhalwe (ngamagama abomvu), ubuncane bezinhlamvu eziyi-150 kanye nezinhlamvu ezingama-255.
I-imeyili yokuqinisekisa: Yini ezosetshenziswa ngesikhathi senqubo yokuqinisekisa nokuthi yini ezosuswa uma i-akhawunti isakhiwe.
Iphasiwedi Entsha: Okufanele kudalwe kulandela izidingo ezicacile eziboniswe kwifomu lokubhalisa.
Kanye ucindezelwe inkinobho«Continuar»Ama-imeyili ama-2 azofika ekhelini le-imeyili elibhaliwe. Omunye onomyalezo wokubonga ngokubhalisa endaweni yesikhulumi kanti omunye une- ikhodi yokuqinisekisa okumele ifakwe esikrinini sokubhalisa esilandelayo ukuqhubeka nenqubo. Lesi sinyathelo sigcina esikrinini esilandelayo lapho saziswa khona ukuthi ikhodi iqinisekiswe ngempumelelo, nalapho inkinobho ibizwa khona «Continuar».
Kanye ucindezelwe inkinobho «Continuar», kuvela iwindi elisha nge«Términos del Servicio», okumele siyifunde futhi siyamukele, ngokubheka ibhokisi lokuhlola elibizwa ngokuthi ngiyamukela, bese sicindezela inkinobho ebizwa «Continuar». Ekugcineni kuvulwa iwindi elisha (https://apps.disroot.org/) isibonisa sonke izinsizakalo ezitholakalayo (izinhlelo zokusebenza) wePlatform «Disroot».
Esigabeni Iphasiwedi iwindi elisha le-«Inicio de Sesión», lapho kufanele sethule khona i- «Usuario y Contraseña» kudalwe ukungena ku-Platform «Disroot». Singaya futhi ngqo kwinsizakalo ngayinye. Ukufaka nokusebenzisa izinsizakalo ezinikezwe lapho kufanele silinde isikhathi esiphezulu se- Amahora wokusebenza angama-48 noma kuze kube yilapho ipulatifomu nge-imeyili isitshela ukuthi sesivele sinikwe amandla wokusebenzisa izinsizakalo zayo eziku-inthanethi.
Singabona kanjani, uma sesingaphakathi, ipulatifomu ye «Disroot» inezinsizakalo ezilandelayo online:
Imeyili: Isevisi ye-imeyili
Ifu (Ifu): Isevisi Yokugcina Amafu
Ukuhlakazeka: Ukufinyelela kwi-Diaspora Community Network.
Iforamu: Igumbi Lesithangami Somphakathi.
Ingxoxo (XMPP): Igumbi Lokuxoxa Lomphakathi.
I-Etherpad (Amabhulokhi): Ukuhlelwa ngokubambisana kwemibhalo ngesikhathi sangempela kusiphequluli sewebhu.
I-Ethercal (ama-Calcs): Ukuhlelwa ngokubambisana kwamaspredishithi ngesikhathi sangempela kusiphequluli sewebhu.
I-Privatebin (Bin): I-Pastebin nebhodi lezingxoxo ku-inthanethi, umthombo omncane kanye nomthombo ovulekile.
Layisha: Insizakalo yokubamba amafayili wesikhashana yokwabelana ngezixhumanisi.
I-SearX: Isevisi yokusesha usebenzisa injini yokusesha ye-SearX Meta
Amapholi (Amapholi): Ukuhlelwa kokuqokwa kanye nensizakalo yokwenza izinqumo ngokuya nge-Framadate.
IBhodi Lephrojekthi (iTaiga): Ithuluzi lokuphathwa kwephrojekthi.
Iphasiwedi: Isigaba sokuphatha ukushintsha noma ukusetha kabusha iphasiwedi nokuphatha imininingwane yomuntu yomsebenzisi.
Njengoba sibonile, «Disroot» iyipulatifomu ewusizo kakhulu online, ngoba isivumela ukuthi sisebenzise izinhlobo eziningi zezinhlelo zokusebenza nezinsizakalo ezinenani elikhulu empilweni yethu yamanje yedijithali yansuku zonke, futhi zonke zikhululekile futhi zivikelekile. Ngendlela yokuthi sikwazi ukwenza ukufuduka okuyigugu futhi okuqhubekayo kuye «espacios más libres, seguros, privados y confiables», ezenziwe ngabethu «Comunidad del Software Libre».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » IDisroot: Ipulatifomu yamahhala, yangasese nephephile yamasevisi aku-inthanethi
ILinus Torvalds izofaka i-dm-clone yegatsha le-Linux Kernel 5.4
Le yindlela abazame ngayo ukuduna i-akhawunti ka-Albert Rivera kaWhatsApp